Fomba fandoavam-bola - ASFO Store
Miorina amin'ny "Mihoatra mankany Checkout", afaka misafidy ny iray amin'ireto fomba ireto ianao amin'ny safidy "fandoavam-bola":
(Tsy manan-kery ny fividianana mivantana atao ao amin'ny www.asfo.store.
Aorian'ny famenoana ny fangatahana dia haverina any amin'ny pejy fandoavanao ianao. Amin'izany, haseho ny entanao, enti-milaza sy vidiny. Halefa ny baiko raha vantany vao mahazo fanamafisana ny fandoavam-bola izahay.
Ampahafantarina ho antsika vetivety rehefa vita ny fandoavam-bola, noho izany dia tsy mila mandefa aminay ny antotan-taratasy manohana azy.
Raha sendra manana fanontanianao ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny serivisy ho an'ny mpanohana anay, na mandefa mailaka any amin'ny contact@asfo.store.
Raha misafidy ny safidin'ny carte de crédit ianao (VISA na MASTERCARD) dia haverina amina fifandraisana azo antoka ho anay hahazoana alalana HiPay.
Hasaina angatahana anarana ianao, daty lany andro sy fehezan-dalàna fiarovana, izay eo ankavanan'ny efitrano fanoratana karatra eo an-damosin'ny karatra ary amboara misy isa telo, voatondro CVV (code verification). Mba hahalavorary ny tranom-barotrao dia takianay izany, rehefa mampiasa carte de crédit ianao dia mametraka laharana kaody 3 na 4 fiarovana (CVV). Satria ny kaody dia ao anatin'ny karatra ny tenany, ny fisorohana rehetra dia mety ho voasakana. Ity fomba fandoavam-bola ity dia misy sarany fanampiny ary manampy 1.6% amin'ny sandan'ny volan'ny entana.
Ity fomba fandoavam-bola ity dia manan-kery ho an'ny baiko Home Home Deliver of Medicine na raha sendra mipetraka ao amin'ny Distrikan Maia ianao ary efa nampiditra entana tsy fanafody amin'ny cartesinao.
Fanamboarana fihenam-bidy / Point-of-sale
Isaky ny misafidy ity fomba fandoavam-bola ity ianao dia manana terminal amidy amam-bidy ny mpandefa mba hahafahanao manao ny fandoavana ny volanao amin'ny fotoana anaterana.
Raha sendra manana fanontanianao ianao dia aza misalasala mifandray amin'ny serivisy fanohanana ny mpanjifa.
Isaky ny misafidy ity fomba fandoavam-bola ity ianao dia miova ny lehilahy amin'ny fandefasana ka raha tsy mahazo vola marina ianao amin'ny fandoavam-bola dia azo atao izany amin'ny fotoana anaterana.
Baiko, taratasy fangatahana ary valin-kafatra.
Ireo antontan-taratasy navoakan'ny tranokala ary alefan'ny mailaka dia tsy misy sandan-kaonty, fa izy ireo dia antontan-taratasy manohana ny fametrahana ny baiko na ny fepetra misy ao aminy. Ary koa, ireo antontan-taratasy navoakan'i HiPay rehefa nandoa vola dia tsy misy fiantohana. Ny fangatahana sy fidiram-bola miaraka amin'ny sandan'ny kaonty dia navoakan'ny rindrambaiko fidirana ary alefa miaraka amin'ny baikoo na alefa amin'ny alàlan'ny fandefasana baiko.
Raha mila fanazavana na soso-kevitra, mifandraisa aminay.